Cabdiraxmaan Cabdishakuur oo ku eedeeyay ukuumadda inay ka dab qaadanaysa Madaxweynaha Waqtigiiso dhamaaday ay ku adkeysatay in qodobadii heshiiska aysan aqbalin. | Dayniiile.com-Latest news from around the world
Home Warkii Cabdiraxmaan Cabdishakuur oo ku eedeeyay ukuumadda inay ka dab qaadanaysa Madaxweynaha Waqtigiiso...
Xili xalay uu fashil ku dhamaaday shirkii u socday Midowga Musharaxiinta iyo Xukuumada Rooble ayaa Waxaa arintaas ka hadlay Musharixiinta oo fashilka shirkaas Dusha u saaray Madaxweynaha Waqtigiisa dhamaaday.
Hoggaamiyaha Xisbiga Wadajir Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame ayaa sheegay in xukuumadda Soomaaliya ay ka dab qaadanaysa Madaxweynaha Waqtigiiso dhamaaday ay ku adkeysatay in qodobadii heshiiska aysan aqbalin.
Waxaa uu ku eedeeyay ra’iisul wasaare Rooble mid aan la heyn go’aanka doorashooyinka dalka taa badalkeeda uu uga dambeeyo Madaxweynaha waqtigiiso dhamaaday ee Farmaajo oo uu sheegay in uu si joogto ah farriimo ugu soo dirayay.
“Shirka waxaa fashiliyay dadka farriimaha u soo dirayay Rooble oo ah mid aan aqoon awooddisa dastuuriga ah” ayuu yiri Hoggaamiyaha Xisbiga Wadajir Cabdiraxmaam Cabdishakuur Warsame
Sidoo kale Xukuumada ayaa eeda dusha u saartay Midowga Musharixiinta oo ay sheegeen in uu shirka Fashiliyay.
Previous articleDiyaarad Helikopter oo ay Milliteriga Turky leeyihiin oo ku burburtay meel ku dhow Tuulladda Cekmece
Next articleTiro yaxaasyo oo la baadi goobayaa oo ka baxsaday beer lagu xanaaneynayay oo ku taal gobolka Western Cape ee Koonfur Afrika
Maraykanka, oo tilmaamay in ciribtir qowmiyadeed uu ka socdo Galbeedka Tigray.
Ciidamada amaanka iyo banaanbaxayaal iskaga hor imaaday Myanmar..